Dowlada Austria oo Lacagta ka jareysa Dadka Shaqo la'anta ee diida Talaalka
HomeWararka CaalamkaDowlada Austria oo Lacagta ka jareysa Dadka Shaqo la’anta ee diida Talaalka
September 17, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Dadka shaqo doonka ah ee Austaria waxay halis ugu jiraan inay waayaan qaar ka mid ah dheefaha shaqo la’aanta haddii ay diidaan talaalka COVID-19, warbaahinta maxalliga ah ayaa werisay Khamiista.
Wargeyska Der Standard ee ka soo baxa Austria ayaa la wadaagay warqad ay Wasaaradda Shaqada ee Austria u dirtay Agoosto 25 -keedii Xafiiska Shaqada Dadweynaha ee Austria (AMS).
Waxay sheegtay in haddii ay dhacdo in dadka shaqo la’anta ay diidaan dalab kasta oo shaqo sababo la xiriira shuruudda ah in la tallaalo, AMS waxay xaq u yeelan doontaa inay jarto macaashka shaqo la’aanta.
Xaaladdan oo kale, faa’iidooyinka shaqo la’aanta dadka shaqo -doonka ah ee aan haysan cudur -daar caafimaad oo ah inaan la tallaalin ayaa la xannibi karaa illaa lix toddobaad.
durba Vienna iyo meelo kale dadka shaqo raadiska ayaa lagu xiray sharuudo ku aadan in ay talaalka soo qaateen si shaqo loo siiyo.
Wadanku wuxuu diiwaangeliyay 2,198 kiisas cusub oo coronavirus ah, taasoo wadarta guud ka dhigaysa in ka badan 718,000, 14 qofna way u dhinteen la -dagaallanka cudurka 24 -kii saac ee la soo dhaafay, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 10,870.